San Htun's Diary: October 2011
မိုင်း၊ ဆူနမ်နဲ့ရာမားတို့ က ကျောင်းကို တနေ့ တည်း ရောက်လာကြပြီး ကျောင်းကနေ ထွက်ခွာတော့လည်း တနေ့ တည်း ထွက်ခွာသွားကြပါတယ်။ သူတို့ ထက် ၃ရက် နောက်ကျပြီးမှ ရောက်လာတဲ့ စန်းထွန်းကတော့ စာမေးပွဲမှာ အမှတ်နည်းသွားလို့ သူတို့ ထက် ၃လ နောက်ကျပြီးမှ ကျောင်းကနေ ခွာရမှာပါ။ မိုင်းကတော့ သူကျောင်းကိုလာတဲ့နေ့ က ဝတ်လာတဲ့အင်္ကျီကို ကျောင်းကနေ ထွက်ခွာတဲ့အချိန်မှာ မရည်ရွယ်ဘဲ ဝတ်ထားမိတယ်တဲ့။
စီနီယာတွေ ရှိတုန်းကတော့ မိုင်းကလည်း သူ့ ဗီယက်နမ်စီနီယာ Nga ၊ ဆူနမ်တို့ ကလည်း သူတို့ စီနီယာ Asmita နဲ့ ကပ်နေတာပေါ့။ စီနီယာတွေလည်း ကျောင်းက ခွာတော့ ကပ်စရာလူမရှိတော့ လေးကောင်သား ကပ်ကြတာပေါ့။ အမြဲ ရထားကြီးလို တတွဲတွဲ။ မိုင်းနဲ့ဆူနမ်က အခန်းကပ်လျက်၊ သူတို့ နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်က စန်းထွန်းနဲ့ရာမား။ မိုင်းအခန်းဆီသွားပြီး တံခါးခေါက်စရာမလိုပါဘူး။ ဆူနမ်က သူ့ အခန်းထဲကနေ မိုင်းလို့လှမ်းအော်လိုက်ရုံပါ။
မော်ဒန်အလားပိန်တဲ့ ဗီယက်နမ်မလေး မိုင်းကို Chopsticks လို့နာမည်ပြောင်ပေးထားပါတယ်။ သူ့ ခြေတံလေးက Chopsticks နဲ့ တူလို့ ။ ပန်းရောင်ကြိုက်တာများ အကုန်လုံး ပန်းရောင်။ တခါတလေ သူ့ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီကပါ ပန်းရောင်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြမယ်ဆိုလို့အားလုံးက No ရတယ်။ သူရတဲ့ အင်္ဂလိပ်သီချင်း တကြောင်း၊ နှစ်ကြောင်းကို ထပ်ခါထပ်ခါ ဆိုပြီး အသံနဲ့နှိပ်စက်တတ်သူပါ။ Beyonce ရဲ့I am single lady. I am single lady အစား I am pink lady. I am pink lady လို့ဆိုတတ်သူပါ။
သူ့ အင်္ဂလိပ်စာကိုတော့ အမေရိကန်တွေကလွဲရင် တို့ တွေအားလုံးက နားလည်ပါတယ်။ မလေးရှား HP မှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး ကယ်လီဖိုးနီးယားက ကုမ္ပဏီအခွဲကို ပို့ ပါတယ်။ Recession ဖြစ်တော့ ပြန်လာရတယ်။ အလုပ်အရမ်းလုပ်ရတဲ့ ဗီယက်နမ်တွေပါ။ ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ရင် သူမသိတာ ဘာမှမရှိလို့မိုင်းကပဲ အားလုံးကို စာရှင်းပြရတာပါ။ စိတ်ရင်းကောင်းတာမို့လူချစ်လူခင်များပါတယ်။ အဲ သူမကြိူက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ စကားတောင် ဟဟ မပြောဘူးဗျား။
အွန်လိုင်းမှာ အမြဲ Invisible နဲ့နေပြီး ဖုန်းကလည်း သူ့ ဘဲဘဲနဲ့တချိန်လုံး ပြောနေတတ်သူမို့အမြဲ Inavailable ။ Invisible and Inavailable မိုင်းလို့ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ အချက်အပြုတ် မကျွှမ်းတဲ့သူမို့အမြဲ ရေလုံပြုတ်။ လူပိန်သလောက် အစားကတော့ တို့ တွေထက် စားနိုင်ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်တွေ အစားသောင်းကျန်းပုံအကြောင်း Yummy ! ဆိုပြီး ပို့ စ်ရေးဖူးပါတယ်။ လူက ပိန်ညောင်နေတော့ ရာသီဥတု နည်းနည်းအေးရင်ဖြင့် သွေးအားနည်းကာ ချောင်းတဟွပ်ဟွပ် ဆိုးနေတတ်ပါတယ်။
ဗီယက်နမ်မှာ ဆိုင်ကယ်မောင်းခဲ့တဲ့ မိုင်းက အုပ်စုထဲမှာ ကားမောင်းလိုင်စင် အရင်ဆုံး ရပါတယ်။ နောက်တော့ ဆူနမ်နဲ့ရာမားကို သင်ပေးတယ်။ ဆူနမ်နဲ့ရာမား လိုင်စင်ရတော့ ဆူနမ်က စန်းထွန်းကို သင်ပေးတယ်။ လူပိန်ပေမဲ့ အသံကတော့ မပိန်ပါ။ စိတ်မထင်ရင် မထင်သလို တပြဲပြဲ အော်ဟစ်တတ်ပါတယ်။
ခရက်ဒစ်ကဒ်လည်း သူအရင်ဆုံး ရပါတယ်။ သူ့ခရက်ဒစ်ကဒ်ကို အကြောင်းပြုပြီး ပါတီတွေ အတော်နွှဲလိုက်ရတယ်။ ခရစ်ဒစ်စကိုးမြှင့်အောင် သုံးပေးရတယ်ဆိုပြီး တို့ တွေ ဝိုင်းညစ်ကြတော့ သူ့ ခရက်ဒစ်လည်း လုံးပါးမပါးရုံတမယ်။ ၆နှစ်ကြာ ဒိတ်ခဲ့တဲ့ ဂရင်းကဒ်ပိုင်ရှင် သူ့ ဘဲဘဲနဲ့နှောင်နှစ်မှာ မင်္ဂလာဆောင်မှာမို့စတိတ်မှာ အခြေချမဲ့သူပါ။ ပင်စင်ယူတဲ့အချိန်မှာတော့ ဗီယက်နမ်ကို ပြန်ပြီး ခေါင်းချဖို့စိတ်ကူးထားသူပါ။ ဘာသာမဲ့ပေမဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအယူရှိပြီး မင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင်တော့ သူ့ ဘဲဘဲ ဘာသာ ခရစ်ယာန်ကို ပြောင်းမဲ့သူပါ။ Ohio ပြည်နယ်က အလုပ်ရလို့Ohio ကို တခါတည်း သွားသူပါ။
ဆူနမ်နဲ့ရာမားကတော့ တက္ကသိုလ်နောက်ဆုံးနှစ်ကတည်းက အလုပ်ဝင်တော့လည်း အတူတူ ကျောင်းကို ရောက်လာတော့လည်း အတူတူ ကျောင်းကနေ ထွက်ခွာတော့လည်း အတူတူ။ MaryLand က သူတို့စီနီယာ Asmita ဆီသွားနေပြီး အင်တန်း အလုပ်ရှာ၊ Distance Education တက်ရမှာပါ။ Asmita မန်ချေးက သူ့ အိမ်မှာ အခန်းတခန်း၊ အစားအသောက်၊ လေယာဉ်လက်မှတ်က အစ အကုန်ခံပေးတာပါ။ သူတို့ အကြောင်း သူ့ နောက်လိုက်နေပုံများဆိုပြီး ပို့ စ်ရေးဖူးပါတယ်။
သန့် စင်ခန်း ခြားနေတာတောင် အီရန်မ Nikoo ခမျာ ရှေ့ ခန်းကို ပြောင်းပြေးရလောက်အောင် လူကောင်သေးပေမဲ့ ရာမားရဲ့ ရယ်သံက မသေးပါ။ ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့ ရာမားချက်သမျှကို စားပြီး ဆူနမ်မှာ ပေါင်၂၀ တိုးလာပါတယ်။ ပြိုင်ချင်တဲ့ စိတ်ကလေးရှိပေမဲ့ သဘောမနောကောင်းသူပါ။ မသိတဲ့သူဆိုရင် စကားမပြောပေမဲ့ ခင်သွားရင်တော့ နားငြီးအောင် ပြောတတ်သူပါ။ အလှအပရေးရာ ကျွှမ်းကျင်သူမို့မိုင်းနဲ့ စန်းထွန်း အလှအပရေးရာမှန်သမျှ ရာမားဆီမှာ အကြံညဏ်တောင်းခံရတာပါ။ ချောမောပြီး ညဏ်ကောင်းတဲ့ ရာမားကို နီပေါကောင်လေးတိုင်းက ချိတ်ချင်ပေမဲ့ ဆူနမ်ရဲ့ ဗလကို ကြောက်လို့ငြိမ်နေရသဗျား။
အုပ်စုထဲမှာ အသက်အငယ်ဆုံးပေမဲ့ ဗလအကြီးဆုံး၊ အမကြီးတယောက်လို စောင့်ရှောက်တတ်တာက ဆူနမ်ပါ။ စိတ်ရင်းလည်း အတော်ကောင်းရှာပါတယ်။ သဘောကောင်းတော့ မိုင်းနဲ့ရာမား ညစ်သမျှကို ခံရတာပါ။ ဘာလုပ်လုပ် စေ့စပ်သေချာစွာ လုပ်တတ်ပြီး စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သူပါ။ ပေါင်၂၀တိုးလာလို့ အာလူးကြော် မစားရဘူးဆိုပြီး ရာဇသံပေးထားတဲ့ ရာမားကြောင့် စန်းထွန်းအခန်းမှာ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် အာလူးကြော် လာတီးရတဲ့သူလေးပါ။
ဆူနမ်နဲ့ရာမား ဒံပေါက်ချက်နည်းကို YouTube ကနေ ကြည့်ပြီး လက်တည့်စမ်းသမျှကို ကောင်းလိုက်တာ ကောင်းလိုက်တာလို့ပြောပြီး မိုင်းနဲ့စန်းထွန်း နှစ်ကောင်က ကပ်ကပ်တီးလေ့ရှိပါတယ်။ ငပျင်းနှစ်ကောင် မိုင်းနဲ့ စန်းထွန်းကတော့ ချက်ဖို့ပျင်းလို့အပြုတ်တွေနဲ့နှစ်ပါးသွားပေမဲ့ ဆူနမ်နဲ့ရာမားကတော့ နေ့ တိုင်းနီးပါး ချက်ပြုတ်ကြတာပါ။ ချက်ပြုတ်ရမှာ ပျင်းလာရင် အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်ဘူဖေး တဘူးစီ ဝယ်ပြီး အတူတူ စားတတ်ကြပါသေးတယ်။ ရာမားကော်ဖီဖျော်တာ ကောင်းတယ်ဆိုပြီး တို့ တွေက ညာညာ ဖျော်ခိုင်းတတ်သေးတယ်။
တယောက်စိတ်ထားကို တယောက်သိပြီး တကယ့်ကို တသွေးတည်း တသားတည်း ရှိတာပါ။ သူငယ်ချင်းလို ညီအမလို ရဲဘော်ရဲဖက်တွေလိုပါပဲ။ အဆောင်မနေဖူးတဲ့ စန်းထွန်းအတွက်တော့ ပထမဆုံး အဆောင်အတွေ့ အကြုံပါ။ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေရှိရင် အဆောင်နေကျောင်းသူဘဝက အတော့်ကို ပျော်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ကားမောင်းသင်တုန်း ထပ်ခါတလဲလဲ အမှားလုပ်တဲ့ စန်းထွန်းကို ဆူနမ်က စိတ်တိုလာပါတယ်။ ဆရာပဲ ညံ့နေလို့ လားပေါ့။ မိုင်းက အော်ဟစ်ဖို့ဆူနမ့်ကို အကြံပေးပါတယ်။ ဆူနမ်က ဘရိတ် ဘရိတ်လို့အော်ဟစ်လိုက် စန်းထွန်းကလည်း ဒီမှာ ဒီမှာ ဘရိတ်နင်းထားတယ်လို့ပြန်ဟစ်လိုက်။ ကမ္ဘောဒီယားက Samnang Cheng က ဂျူနီယာ တရုတ် Biao၊ ကမ္ဘောဒီယား Chantrea တို့ ကို ကားမောင်းသင်ပေးပုံက ဒီလို။ လမ်းဖြတ်ကူးတဲ့ သူကို တွေ့ ရင် တိုက်ပစ်လိုက်၊ အကွေ့ မှာ မိန်းလမ်းမကြီးက ကားတွေ့ ရင် ဝင်အောင်းလို့အော်ဟစ်ပြီး သင်ပေးတာတဲ့။ ဆူနမ်က တော်သေးတာပေါ့။ နှစ်ကောင်သား အဟစ်ကောင်းတာ ဂျူနီယာ Yanzi ခမျာ ဆူနမ့်ကို ကြောက်ပြီး ကားမောင်းမသင်ခိုင်းတော့ပါဘူး။ တို့ တွေအတွက်ကတော့ အချင်းချင်း အော်ဟစ်နေတာ ဘာမှ မဖြစ်ပေမဲ့ သူစိမ်းအမြင်မှာတော့ ထူးဆန်းနေမှာပေါ့။
မခင်တုန်းကတော့ တယောက်ပန်းကန် တယောက် မနှိုက်ပါဘူး။ ခင်လည်း ခင်ရော တယောက်ပန်းကန် တယောက်နှိုက်၊ မိုကာတခွက်ကို လေးယောက် ဝိုင်းသမ။ တယောက်ကို တယောက်နှိပ်ကွက်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်က ဆူနမ်က ပိုကာဒေါင်းနည်း သင်ပေးပါတယ်။ ပိုကာမဒေါင်းတတ်တဲ့ စန်းထွန်းကိုပါ သင်ပေးပြီး အမှတ်၁၀၀ ရတဲ့အထိ ဆော့ကြတာပါ။ လောင်းကစား လာဘ်မရှိတဲ့ စန်းထွန်းကတော့ အမြဲ စတုတ္တနေရာ လေးယောက်မှာ။ တခါက ပိုက်ဆံကြေးဆော့မယ်ဆိုပြီး ရှိသမျှ အကြွေတွေကို ယူပြီး ဆော့ကြလေရဲ့ ။ မိုင်းနဲ့ စန်းထွန်းဆီက တကျပ်ကျော်ကို ဆူနမ်နဲ့ရာမား သမသွားကတည်းက နောင်များ ပိုက်ဆံကြေးဆို စန်းထွန်းနဲ့မိုင်းက နိုး။
ဘီယာကြိုက်တဲ့ ရာမားနဲ့မိုင်းက ဈေးအပေါဆုံး ဘီယာနှစ်ဘူး၊ ခါးတာမကြိုက်တဲ့ ဆူနမ်နဲ့စန်းထွန်းက ဝိုင်သောက်ပြီး ပါတီတခါတလေ နွှဲပါတယ်။ နည်းနည်းလေးသောက်ပြီး များများလေးမူးကာ အန်တတ်တဲ့ စန်းထွန်းကို ပါးစပ်ထဲ ဆားထည့်ပေး၊ ရေနွေးနွေးလေးထဲ သံပုရာသီးညှစ်ပြီးတိုက်၊ ဆေးတိုက်ရတာနဲ့သူတို့ ရဲ့ဇရက်မင်း စည်းစိမ်ပျောက်။ နောင် စန်းထွန်းကို မတိုက်တော့ဘူး ပြောပေမဲ့ နည်းနည်းလေး မူလိုက်ရင် မိုင်းဆီက တငုံ၊ ရာမားအလစ်မှာ တငုံ ငုံလိုက်နဲ့ ။ မိုင်းနဲ့ရာမားလောက်တောင် မသောက်ပဲနဲ့စန်းထွန်း မူးတိုင်း ဆူနမ်က ပြိုင်သောက်ခိုင်းတဲ့ ရာမားနဲ့မိုင်းကို ကြိမ်းတတ်လေရဲ့ ။
ဈေးဝယ်ပြီးလို့ဈေးခြင်းတောင်းထဲ စားလက်စ ရေခဲမုန့် အမှိုက်တွေထားတဲ့ ကျွှပ်ကျွှပ်အိတ်ကို မိုင်းက သိမ်းစရာမလိုဘူး သူတို့သိမ်းလိမ့်မယ်၊ ဗီယက်နမ်မှာဆိုရင် အဲလိုတဲ့။ ဆူနမ်၊ ရာမားက ကျွှပ်ကျွှပ်အိတ်ကို ပြန်သိမ်းသင့်တယ်လို့မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။ စန်းထွန်းကတော့ ကိုယ့်အမှိုက် ကိုယ်သိမ်းရမယ်ဆိုပြီး သွားသိမ်းပါတယ်။ "Vietnamese says no need. Nepali comments it should not be like that. Finally Burmese does the right thing." လို့မိုင်းက ပြောလေ့ရှိပါတယ်။ မတူညီတဲ့ ဓလေ့စရိုက်၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးစံတွေကြားထဲက တူညီတာတခုတတော့ တယောက်ကိုတယောက် ရိုင်းပင်းကူညီစောင့်ရှောက်ကြတာပါ။
အခုတက်နေတဲ့ ဂျူနီယာထဲ ၃၆ ယောက်မှာ မိန်းကလေးဆိုလို့Yanzi တယောက်တည်း ပါပါတယ်။ တဦးတည်းသော သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ တရုတ်တွေက တယောက်တည်းနေတာ အကျင့်ပါနေပြီ။ တရုတ်ကျောင်းသားတွေကလည်းများတော့ Yanzi က သူတို့ တွေနဲ့လုံးနေတာပေါ့။
အမြဲတတွဲတွဲ လေးယောက်ကနေ ခုလို ၃ယောက်က တပြိုင်နက်တည်း ခွဲခွာသွားတော့ ကျန်နေတဲ့ စန်းထွန်းခမျာ တယောက်တည်း ယောင်ချာချာ။ စကားသံတွေ ဆိတ်သုဉ်း၊ ရယ်သံတွေ ခြောက်ကပ်ကာ အရာအားလုံး တိတ်ဆိတ်သွားသလို ခံစားရပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ဘာဖြစ်ဖြစ် ဆူနမ်၊ ရာမား၊ မိုင်းရှိတယ်ဆိုပြီး အားရှိပေမဲ့ ခုတော့ တယောက်တည်းဆိုတဲ့ အသိက အတော့်ကို ဝမ်းနည်းတာပါ။ စလုံးလို သေးတဲ့ နေရာမှာတောင် အိမ်နီးနီးလေးနေပြီး မတွေ့ ဖြစ်တာ စတိတ်လို ကျယ်တဲ့ နေရာမှာတော့ နောင်တွေ့ ဖို့ ဆိုတာ အတော့်ကို ရေစက်ရှိမှပါ။ ကိုယ်တိုင်လည်း အင်တန်းဆင်းတဲ့အချိန် ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ်ရောက်မယ်မသိ။
ပရောဂျက်တွေ ပိ၊ အိမ်စာတွေနဲ့ဘီးစီး၊ အစားအသောက် မကောင်း၊ ရာသီဥတု အေးနဲ့ပင်ပန်းလွန်းတဲ့ ကျောင်းသားဘဝမှာ ဆူနမ်၊ ရာမား၊ မိုင်းတို့ ကြောင့် ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတာပါ။ တယောက်အခက်အခဲကို ဝိုင်းကူဖြေရှင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျနေချိန်မှာ အားပေးနဲ့အတူတူ ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြတာပါ။ တယောက်တည်း ရပ်တည်နိုင်အောင် စန်းထွန်းကလည်း ကြိုးစားရင်း၊ ဆူနမ်၊ ရာမားကလည်း အလုပ်ရအောင် ကြိုးစားရင်း၊ မိုင်းကလည်း အလုပ်အသစ်မှာ အဆင်ပြေအောင် ကြိုးစားရင်း ဒီနေ့ မှာတော့ တို့ တွေရဲ့ဘဝစာမျက်နှာသစ် တချက်ဖွင့်လိုက်ကြပါပြီ။
American Dream ကို အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ မိုင်း၊ အမြဲ အားငယ်တတ်ပြီး နီပေါက မိဘဆွေမျိုးတွေကို လွမ်းနေတတ်တဲ့ ရာမား၊ အိန္ဒိယမှာ ကြီးပြင်းခဲ့လို့မကြိုက်တဲ့ နီပေါတချို့ ဓလေ့ထုံးစံတွေကို တော်လှန်ပုန်ကန်နေတဲ့ ဆူနမ်၊ အရာရာကို မိဘ၊ မကြီးကြောင့် လွယ်လွယ်ကူကူ ရခဲ့ပေမဲ့ စတိတ်ရောက်မှ အရာရာ ခက်ခဲနေလို့လက်ပစ်ကူးနေတဲ့ စန်းထွန်း ။ တနေရာစီ ဝေးသွားပေမဲ့ စိတ်ထဲနီးနေပါတယ်။ ဆင်းရမဲ့ ဘူတာရောက်လို့မိုင်း၊ ဆူနမ်၊ ရာမားတို့ဆင်းသွားပေမဲ့ စန်းထွန်းတယောက်ကတော့ ဘဝရထားကြီးကို ဆက်စီးနေရင်း....
မိုင်း၊ စန်းထွန်း၊ ရာမား၊ ဆူနမ်တို့Dashain ပွဲတော်မှာ ပဲပိကာ စက်ဆီ၊ ချောဆီ ထုတ်နေပုံ
အောက်တိုဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၁။